आइपीओ आउने तयारीमा रहेका यी बिभिन्न ५ कम्पनीको यस्तो छ वित्तीय अवस्था ? – OnlinePahar
आइपीओ आउने तयारीमा रहेका यी बिभिन्न ५ कम्पनीको यस्तो छ वित्तीय अवस्था ?
काठमाडौं : आइपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेका ५ वटा जीवन बिमा कम्पनीहरुले पनि गत आर्थिक वर्षमा औसतमा राम्रो प्रदर्शन गरेका छन् । यी कम्पनीहरुको रिजर्भ कोष, जीवन बिमा कोष, खुद बिमा शुल्क लगायत महत्वपूर्ण सूचकमा सुधार भएको छ । पछिल्लो पटक १० वटा नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरुले सञ्चालन अनुमति पाएकामा ५ कम्पनीले आइपीओ जारी गरिसकेका छन् । बाँकी ५ वटाको भने आइपीओ आउन बाँकी रहेको छ ।
बाँकी विस्तृतमा जान्नको लागी तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला
← पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – १८ भाद्र २०७८ शुक्रवारको राशिफल पढौं
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – १९ भाद्र २०७८ शनिवारको राशिफल पढौं →